I-China Railway Express inika isikhokelo esitsha kuThutho lweLizwe lweLoliwe
Chaza i-China Railway Express inika umkhombandlela omtsha kuThutho loLoliwe lweHlabathi; I-China Railway Express, uloliwe wokuqala othutha iimpahla oza kusuka e-China kwaye adlulele eYurophu ngokusebenzisa iMarmaray, wamkelwa kwisikhululo se-Ankara nge-ce ...
UDaqian njengenxalenye ye-China International Rail Transit Exhibition
Umboniso wase China wezoThutho lwaMazwe ngaMazwe oThutho, okwaziwa ngokuba yi-Rail + Metro China, usingathwe liqela laseShanghai Shentong Metro kunye ne-Shanghai INTEX. Umboniso ububanjelwe kwiHolo W1 yeZiko laseShanghai elitsha leZiko lasePudong. Ngaphezulu kwe-180 yemiboniso kaloliwe evela kumazwe ayi-15 nakwimimandla eyinxalenye ...
Uloliwe wokuqala othutha iimpahla uza kudlula eBosphorus
ngomphathi ku 20-06-11
USekela-Mphathiswa wezoQoqosho eAzerbaijan uNiyazi Seferov uthe iChina Railway Express iya kuba ngololiwe wokuqala othutha abantu oya kudlula eBosphorus.
Uloliwe luya kukhokelela kwintsebenziswano entsha
UMongameli woLoliwe kaZwelonke waseKazakhstan uSauat Mynbaev uthe iprojekthi ye-One Belt One Road izakuphucula intsebenziswano kwezothutho nakwindlela yokuhamba. Echaza ukuba amazwe athatha inxaxheba kule projekthi abe negalelo kunxibelelwano lweAsia neYurophu, uMynbaev ubhengeze ukuba iKazakhstan iza ...
Ukusuka empuma kuye entshona, sifezekise intsebenziswano enkulu noololiwe belizwe abali-10 kunye
Umphathi Jikelele we-TCDD u-Ali İhsan Uygun wathi i-TCDD iye yangumlingisi onamandla wengingqi kunye nehlabathi ngemigaqo-nkqubo elandelwayo elandelwa ngu-Mphathiswa Wezothutho kunye nezixhobo uCahit Turhan. Ebonisa ukuba namhlanje sisiganeko esibalulekileyo kuloliwe welizwe, u-Uygun wathi, “Ukusuka empuma ukuya entshona ...
Ukuhamba ngololiwe ohambisa imveliso efanayo kwiitrektara ezingama-42 kuya kugcwalisa i-11 lamawaka angama-483 eekhilomitha zendlela yeentsuku ezili-12
UMphathiswa uTurhan, oqale uhambo lwakhe esuka eXi'an, China kwaye ephethe iilori ezingama-42 ezilinganayo nomthwalo wemveliso ye-elektroniki, unobude obupheleleyo beemitha ezingama-820 ezilayishwe ngesikhongozeli se-42, ilizwekazi le-2, ilizwe le-10, i-2 lamawaka eekhilomitha ezili-11 baxele ukuba I-483 iya kugubungela usuku. UTurhan uthe ...
Ixesha lokuthuthwa kwemithwalo ye-BTK China-Turkey ukuya kwiintsuku ezili-12 ngenyanga, yawela kwiintsuku ezili-18 eYurophu
I-Baku-Tbilisi-Kars Railway Line, inyanga umthwalo wexesha lokuhamba phakathi kwe China kunye ne Turkey i-12 yeentsuku, "iprojekthi yenkulungwane" iMarmaray kuba idityaniswe ngexesha eliphakathi kweMpuma Ekude neNtshona Yurophu iTurhan yathi ukwehla kweentsuku ezili-18. , Kunye neAsia kuthathelwa ingqalelo i-trillion ezingama-21 zeedola ...
Uloliwe wokuqala we-China Railway Express unike umkhombandlela omtsha kwezothutho lukaloliwe lwehlabathi
I-China, i-Asiya, idibanisa i-Yurophu kunye ne-Middle East ejolise ekudalweni kwesiseko esikhulu kunye nothungelwano lokuhamba kweprojekthi ye "One Belt One Road" iTurhan ichaze ukuba banikela ingqalelo ekhethekileyo, kule meko, iTurkey-Azerbaijan kunye nobomi kwisiseko yentsebenziswano creat ...
Ukugqibezela unxibelelwano olungekhoyo yayiphakathi kwezinto zethu eziphambili
I-Turkey iseke uluhlu olwahlukileyo lwezothutho kule minyaka idlulileyo ukwenzela ukomeleza indawo yangoku ngokwenza, kunye neepaseji, phakathi kwamazwekazi angaphazanyiswa kunye nezixhobo zothutho ezikumgangatho ophezulu. UTurhan ucacisile ukuba, uMfumanisi utyale imali engama-754 ezigidi zezigidi ...
Inkqubo ezizenzekelayo zokuqhuba (iiTos) kunye nezibonelelo
1. Chaza ukuqhuba okanye ukuqhuba ngokupheleleyo koololiwe kwiinkqubo zothutho loluntu ziya zisasazeka. Zombini iibhloko ezihambayo ezenzekelayo ezisebenza ngokuhamba ngololiwe zinokwenzeka. Yenzelwe uvavanyo lweminyaka emininzi kunye nokusetyenziswa h ...
Amagama aphambili B, Amagama aphambili A, Zonke iiMveliso